Gobolka Sool oo Laga Bilaabay Gaarsiinta Adeegyo Caafimaad[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Gobolka Sool oo Laga Bilaabay Gaarsiinta Adeegyo Caafimaad[Sawirro]
Degmada Turakaq ee gobolka Sool ayaa wasaarada caafimaadka Puntland oo kaashaneysa UNFPA waxay ka bilawday fulinta adeegyo caafimaad oo dhamaystiran (Integration Outreach) oo horey tijaabadiisa lagu guuleysatay.
Dr. Cabdiraxman Xasan Xuseen ayaa faahfaashay bilawgii barnaamijka ay gobolka Sool laga fulinayo oo uu tilmaamay in la bartilmaameydsanayo Hooyada dhaqmaada ah iyo ilmaha ka yar shan sanno jirka.
Waxa uu raacshay Dr. Cabdiraxman inay iskugu jiraan dhakhatiirta caruurta kuwa dumarka iyo weliba qaybo qaabilsan Nafaqaynta dhalaanka, talaalka iyo qaybta baaritaanka iyo shaybaarka.
Qorshahan lagu gaarayo goobaha fog fog ee aan adeegyada asaasigu badi ka jirin ayaa waxa uu sheegay Isu-duwaha caafimaadka Gobolka Sool Cabdiraxman Cumar cadde in maalmaha soo socda ka wadi doonaan degmada Turkarq iyo deegaanda ku dhow dhow ka hor intaan loo gudbin degmada Boocame.
Cabdiraxman ayaa ku daray inay dawooyin siiyeen dadka bukaanka ah taasi ay tayadeedu aad u sareyso . sidoo kalena xusey in xaaladaha aan goobta wax looga qaban Karin loo soo wareejinayo Isbitalka guud ee Garowe.
Furitaankii barnaamijka maanta ayaa waxa ka soo qaybgalay gudoomiyaha gobollka Sool, ku xigeenka duqa Laascanood iyo gudoomiyaha Tukaraq.
Waxa kooxdan dhakhaatiirta ahi u gudbi doonaan degmada Boocame kadib marka ay shaqada ka dhameyaan Tukaraq.
Warbixinta Iyo Sawirrada